🥇Uzifumana njani izitokhwe ezimfutshane ngo-2021-Funda ukuRhweba ngoJanyuwari ka-2022
Uyenza njani iShishini elifutshane kwi2021
Usenokuba ukhe wayibona imovie iThe Big Short - apho uMichael Burry wenza iibhiliyoni zeedola ngokunciphisa ishishini lasepropathi lokuthengiswa kwezindlu ngo-2007 ngaphambi kokuba liwe. Nangona kunjalo, ubusazi ukuba ukuthengisa okufutshane yinto ekhoyo kubo bonke abathengisi ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali okanye izakhono?
Kwesi sikhokelo, siza kukuhamba ngenkqubo yendlela yokufumana isitokhwe esifutshane kwi-2021.
Ukuqala, siza kuthetha nge-ins kunye nokuphuma kwento ethengisa ngokufutshane kwaye isebenza ngayo. Emva koko, siza kukubonisa into ekufuneka uyenzile ukuze uzuze ngokuthengisa okufutshane. Ukugqiba-sizakubonisa amanyathelo afunekayo ukuthengisa okufutshane kwisitokhwe ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho!
Ukuthengisa okufutshane? Intsingiselo yokuFutshane
Ukubeka ngokulula, 'ukusilela' okanye 'ukuthengisa okufutshane' yinkqubo yokuthelekelela ukuba i-asethi izakuhla. Ngamanye amagama, endaweni yokuthenga izabelo ngokwesiqhelo kuba ucinga ukuba ixabiso liza kunyuka, wenza inyathelo lezemali ngethemba lokuba okuchaseneyo kuyakwenzeka.
Umzekelo, masicinge ukuba kwi-420 yeedola ngesabelo ngasinye, ucinga ukuba izitokhwe zeTesla zixabiseke kakhulu. Ngokusebenzisa indlu yobudala yomrhwebi, ngekhe ukwazi ukwenza inzuzo kule hypothesis.
Nangona kunjalo, ngokusebenzisa i-intanethi Urhwebo lweCFD iqonga, ungabeka iodolo yokuthengisa. Oku kuthetha ukuba ukuba izitokhwe zeTesla ziye zehle kwixabiso, uya kwenza inzuzo. Sukuba nexhala, sichaza ubunzima beCFD yokuthengisa iiodolo kwiinkcukacha ezininzi kamva.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuthengisa okufutshane kugcinelwe isitokhwe kuphela. Ngokuchasene noko, ukuba uyazi ukuba ujonge phi kwaye ufutshane malunga nayo nayiphi na iklasi yeasethi eya kuyo. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwii-indices kunye nee-ETF ukuya kumaxabiso enzala kunye igolide. Ngethamsanqa, yonke imigaqo-nkqubo echaziweyo kwesi siKhokelo kwiiShops eziFutshane ihlala ihleli kuzo zonke izixhobo zemali.
Imizekelo yokuThengisa okufutshane
Thina kuFunda u-2 Urhwebo sifumanisa ukuba imizekelo ebonakalayo yesihloko semali inokunceda ukucoca inkungu. Kananjalo, ngoku siza kubonisa imizekelo embalwa esisiseko yokuba ukuthengisa okufutshane kufana njani.
Umzekelo 1: Ukuhamba ngokufutshane kwii-stock ze-IBM
Kule meko, uyakholelwa ukuba izitokhwe ze-IBM zixabiso liphezulu.
Ngexesha lokubhalwa, izitokhwe ze-IBM zixabiswa kwi- $ 110 nganye
Ugqiba kwelokuba uthengise ngokufutshane izitokhwe ezili-10, uthabathe inani lakho lilonke libe yi- $ 1,100
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, izabelo ze-IBM zixabisa i-990 yeedola- ezimele ukwehla kwe-10%
Uyonwabile ngenzuzo yakho ukuze uthathe isigqibo sokukhupha indawo yakho
Kwiphepha elipheleleyo leedola ezili-1,110- wenze ingeniso ye- $ 110 (10%)
Umzekelo 2: Ukuhamba ngokufutshane kwiZitokhwe zikaFacebook
Kule meko, uyakholelwa ukuba istokhwe sikaFacebook sinokuthi siqhubeke ngokwehla okwexeshana.
Ngexesha lokubhala, izitokhwe zikaFacebook zixabiswa kwi- $ 277 inye
Ugqiba kwelokuba uthengise ngokufutshane izitokhwe ezili-50, uthabathe inani lakho lilonke libe yi- $ 13,850
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, izabelo ze-Facebook zixabisa i-263.15 yeedola- emele ukwehla kwe-5%
Kwiphepha elipheleleyo leedola ezili-13,850- wenze ingeniso ye- $ 692.50 (5%)
Ukuthengisa okufutshane kusebenza njani?
Ngokwezinto ezithile, kukho iindlela ezimbini ezinokuthi ungathengisa ngokufutshane kwisitokhwe. Oku kugubungela indlela yakudala, enzima, kunye nexabiso 'lokuboleka' izitokhwe kwindlu yomrhwebi, uzithengisa ngqo umva Kumthengisi, kwaye emva koko uthenge izabelo kubarhwebi kamva.
Emva koko unendlela entsha, enedigital yokwahlulahlula izabelo ngeCFDs. Oku kukuvumela ukuba ufezekise injongo yakho ngendlela engabizi kakhulu kwaye efanelekileyo. Ngapha koko, uninzi lwamaqonga orhwebo e-CFD esincomela ukuba akuvumele ukuba ubeke isitokhwe simahla kwisitokhwe.
Ngaphambi kokuba siqhubele phambili, kungcono ukuba sichaze ukuba zeziphi iiCFDs. Emva kwayo yonke loo nto, le iya kuba yeyona ndlela isebenzayo yokunciphisa isitokhwe kwi-Intanethi.
Ukuthengisa okufutshane ngeCFDs
Ii-CFDs (iikhontrakthi-zomahluko) zizixhobo zemali ezinokuthengiswa kwi-Intanethi. Isixhobo ngokwaso sixhaswa yi-asethi. Endaweni yoko, luxanduva nje 'lokulandela umkhondo' ixabiso leasethi echaziweyo. Umzekelo, masicinge ukuba izabelo zeDisney zithengiswa nge- $ 124.06 kwiNew York Stock Exchange (NYSE).
Kwelinye icala, umrhwebi wakho omkhethileyo weCFD ubonelela ngentengiso kwizabelo zeDisney ngexabiso elifanayo. Ke, ukuba izabelo zeDisney zonyuke zaya kuthi ga kwi-124.76 yeedola kwimizuzu embalwa kamva, njenge-CFD.
Njengoko unokuthelekelela, iiCFD zilandelela kuphela elona xabiso lempahla yexabiso, oko kuthetha ukuba zikunika ukufikelela kumawakawaka eemarike. Ayisiyiyo le kuphela, kodwa iiCFD yindlela ebiza ixabiso eliphantsi yokurhweba kwimarike oyifunayo, kwaye unokusebenzisa amandla.
Ke oku kuhambelana njani nokuthengisa okufutshane kwestokhwe?
Ewe, uncedo olongezelelekileyo lwee-CFD kukuba uhlala unokhetho lokubeka i-oda yokuthenga okanye i-odolo yokuthengisa. Ngokubeka i-odolo yokuthenga, uqikelela kwixabiso leCFD elonyukayo. Ukuba ubeka iodolo yokuthengisa, wenza okwahlukileyo. Kananjalo, nantsi indlela oza kuyenza ngayo impahla emfutshane kwi-intanethi!
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba kuya kufuneka ubeke i-odolo yokuthengisa kumthengisi weCFD kwistokhwe esifutshane, makhe sicacise ukuba isebenza njani le nto.
Ukucacisa, ngokubeka iodolo yokuthengisa, uxelela umrhwebi wakho ukuba uyakholelwa ukuba izabelo ziya kuhla ngexabiso. Ukuba bayakwenza, uya kwenza inzuzo. Ukuba ngenene banyuka ngexabiso, uya kuphulukana nemali.
Ke, masicinge ukuba ufuna ukunqumamisa istokhwe seFord Motor. Ngexesha lokuthengisa kwakho, izabelo zixabiso kwi $ 8.03. Ngoku, njengoko isitokhwe seFord singasixhasi isixhobo seCFD, awunyanzelekanga ukuba uthengise ngokufutshane 'kwiiyunithi ezipheleleyo'. Endaweni yoko, unokurhweba kancinci okanye kangangoko uthanda - okoko nje udibana nexabiso elisezantsi lomthengisi.
Ufuna ukubambisa i-500 yeedola kwizabelo zeFord Motors ezihla ngexabiso
Kananjalo, ubeka iodolo yokuthengisa exabisa i-500 yeedola
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, iFord Motors ithengisa nge-6.70 yeedola
Oku kuthetha ukuba bawile nge-16.5%
Kwisibonda sakho seedola ezingama-500, wenze ingeniso iyonke eyi- $ 82.50
Nangona kunjalo, uqikelelo lwakho lokuthengisa ngokufutshane aluyi kuhlala luchanekile, ke makhe sibone ukuba bekusenokwenzeka ntoni ukuba ixabiso lezabelo zeFord Motors lonyukile.
Kwakhona, ubeka i $ 500 yokuthengisa iodolo kwiFord Motors ngexabiso lokungena le- $ 8.03
Umzuzu uhamba ngokuchasene nawe kwaye izabelo ngoku zixabisa i-9.01 yeedola inye
Oku kuguqulela kunyuso lwe-12.20%
Uhambe mfutshane kule marike, oko kuthetha ukuba ukwanda kubangela ilahleko
Kwipesenti epheleleyo ye- $ 500, wenze ilahleko ye- $ 61
Njengoko sichaza ngokuthe kratya kamva, unganciphisa ilahleko xa unokuthengisa ngokufutshane ngokubeka i-odolo yokuyeka.
Zeziphi izitokhwe onokuzithengisa ngokufutshane?
Ukuqhubela phambili ukusuka kula macandelo angentla kwii-CFDs, amathuba anokuphela awapheli. Kwakhona, yabelana ngeeCFD azixhaswanga zezona zitokhwe zilandelelweyo. Kananjalo, oku kukunika ukufikelela kwinani elingalinganiyo leemarike zentengiso.
Ezinye zeemarike ezaziwa kakhulu abathengisi abafutshane abathanda ukujolisa zidweliswe apha ngezantsi:
Ngale nto ithethwayo, i-stock CFD brokers esincomayo ikunika ukufikelela kwezinye zeemarike zilandelayo:
Ukutshintshiselana ngeHong Kong kunye nokuCoca
I-Shenzhen Stock Exchange
I-Saudi Stock Exchange (iTadawul)
Lilonke, ukuthengisa okufutshane ngezixhobo zeCFD kukunika iimfumba zamathuba okwenza inzuzo.
Imirhumo yokuthengisa emfutshane
Eli candelo lelona libaluleke kakhulu. Kungenxa yokuba ukuthengisa okufutshane kukutsala umrhumo ongekhe uhlangane nawo xa utyala imali kwizabelo ngokwesiqhelo.
Phambili kule nkxaso mali ngobusuku. Kodwa, ngaphambi kokuba sifike kuloo nto, masigubungele iikhomishini kwaye sisasaze.
Xa usebenzisa i yorhwebo ntengiso iqonga, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini. Oku kuya kuhlawuliswa ngalo lonke ixesha usenza ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo. Kananjalo, kuya kufuneka uyihlawule ikhomishini izihlandlo ezibini- xa uvula naxa uvala.
Umzekelo, masithi umrhwebi omkhethileyo ubiza ikhomishini ye-0.3%
Ubeka i $ 1,000 yokuthengisa iodolo kwizitokhwe zakwaNike
Umrhwebi ukuhlawulisa i $ 3
Xa izitokhwe zeNike ziyehla zaya kuthi ga kwi-900 yeedola uthatha isigqibo sokufaka imali kwiinzuzo zakho ngokubeka i-oda yokuthenga
Oku kuvala urhwebo, nangona kunjalo, kuya kufuneka uphinde uhlawule ikhomishini ye-0.3 %- eyi- $ 2.70
Konke, ikhomishini iyonke kurhwebo lwakho lokuthengisa olufutshane lweNike lubiza i $ 5.70
Njengoko besesitshilo ngaphambili, unokukuphepha ukuhlawula ikhomishini xa usebenzisa omnye wabarhwebi bethu beCFD. Endaweni yoko, kukusasazeka kunye nemali yokuhlawula imali ubusuku bonke ekufuneka uyiqwalasele.
Ukusasazeka ngumsantsa phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso lesitokhwe sakho esikhethiweyo seCFD. Kungcono ukwenza oku ngokweepesenti njengoko oku kukuvumela ukuba uvavanye ukuba ingakanani ekufuneka uyenzile ukuze uphule.
Umzekelo, ufuna ukufinyeza izabelo ze-HSBC
Umrhwebi wakho unikezela ngexabiso lokuthengisa lama-20.73p
Umrhwebi wakho unikezela ngexabiso lokuthenga lama-20.77p
Ukusasazeka kusebenza kwi-0.2%
Oku kuthetha ukuba xa urhwebo lwakho lokuthengisa olufutshane luvulwa, uya kuba yi-0.2% kwangoko kubomvu
Kananjalo, kuphela xa izabelo ze-HSBC ziyehla ubuncinci nge-0.2% apho uya kuba kwindawo yenzuzo
Uninzi lwezabelo zabathengi beCFD esincomela ukuba zisasaze ngokuqinileyo, oko kuthetha ukuba unokugcina isitokhwe semali yakho yokuthengisa ngokufutshane ubuncinci.
Le ntlawulo yinto ongenakukwazi ukuyiphepha xa unesitokhwe esifutshane. Ukubeka ngokulula, le yimirhumo oya kuyidinga ukuyihlawula yonke imihla ukuze ugcine indawo yakho yokuthengisa emfutshane ivulekile. Kodwa kutheni? Ewe, kuya kufuneka usebenzise iiCFDs ukuthengisa ngokufutshane izitokhwe kwi-Intanethi- kwaye iiCFDs 'ziyimveliso'.
Nokuba awusebenzisi ubungakanani (ukurhweba kumda), kunjalo. Njengoko usazi, imveliso yokuphakamisa umgangatho iza nexabiso lenzala- eya kwahluka ngokuxhomekeka kwiasethi. Kodwa, uqweqwe lwawo kukuba oku kuyakutya kwinzuzo yakho yorhwebo.
Ixabiso lokufumana imali ngobusuku obubekiweyo njengepesenti yonyaka, kodwa ke ihlawuliswa yonke imihla. Ngapha koko, intlawulo iya kuqala xa imarike nganye ivala usuku.
Kananjalo, ukuba ubuya kuthengisa isitokhwe esifutshane nge- isicwangciso soshishino lomhla, ngekhe ufune ukuhlawula nayiphi na imali. Nangona kunjalo, kwawona kanye umzuzu wentengiso uyazivalela-kwaye usenesikhundla esivulekileyo seCFD, umrhumo uya kususwa endaweni yakho.
Ngokwimalunga neendleko zobusuku obunye iindleko-ekugqibeleni ziya kuxhomekeka kumrhwebi omkhethileyo. Iindaba ezimnandi zezokuba amaxesha amaninzi akukho njengoko unokucinga. Ngapha koko, abanye abathengisi beCFD banikezela ngemali yokulala ubusuku bonke kwizabelo kwinqanaba lonyaka eliphakathi kwe-3-5%. Ngokulula, unokugcina indawo othengisa kuyo emfutshane ivulekile kangangeenyanga ezili-12 okoko wenza ngaphezulu kwenqanaba lezemali lonyaka!
Ungazifumana njani izitokhwe ukuze uthengise ngokufutshane?
Ngokwenyani akukho mpendulo imfutshane kwaye ikhawulezayo kulo mbuzo. Emva kwayo yonke loo nto, inkqubo yokuchonga ukuba yeyiphi isitokhwe esifutshane ifuna ukuqonda kokubini ngohlalutyo lobuchwephesha kunye nolusisiseko. Njengoko usazi kakuhle, oku kungathatha iinyanga ezininzi ukuba usebenze kakuhle.
Nangona kunjalo, ukunceda ukucoca inkungu, apha ngezantsi sidwelise ezinye zezinto onokuzenza kumathuba athengisa ngokufutshane.
Le yeyona ndlela ilula kakhulu yokwenza inzuzo ngokuthengisa ngokufutshane. Kwiimeko ezininzi, konke okudingayo yingqondo eqhelekileyo kunye nokungxamiseka. Ukubeka ngokulula, uphando olusisiseko yinkqubo yokuvavanya ukuba ibali leendaba elifanelekileyo linokuchaphazela njani ixabiso lesitokhwe. Emva kwayo yonke loo nto, amaxabiso esitokhwe aya enyuka esihla ngokweemfuno kunye nonikezelo. Eli bango kunye nonikezelo lukhuthazwa yindlela isitokhwe esichaphazelekayo esisebenza ngayo - okanye esinokuthi senze ngexesha elizayo.
Umzekelo, masithi iAmazon ikhupha iziphumo zayo zekota- ezingcono kakhulu kunokuba bekulindelwe. Ucinga ukuba ziya kuthini iimarike? Unokuba nakho konke-kodwa-okuqinisekileyo ukuba oku kuyakukhuthaza abatyali mali ukuba bathenge izabelo zeAmazon ngasemva kwiindaba- ukunyanzelisa ixabiso lesitokhwe ukuba lenyuke.
Kwelinye icala lesiphelo, masithi i-Inovio Pharmaceuticals yazisa ukuba uvavanyo lwayo lokugqibela lokugonya lwe-COV-19 lubanjiwe yi-FDA. Ngaphandle kokuthetha ukuba oku kuyothusa abanini-sitokhwe kwaye ngenxa yoko- kunokubangela ukuthengiswa. Ngenxa yoko, eli iya kuba lithuba elihle lokufaka iodolo yokuthengisa kwizabelo! Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhawuleze ukwandisa inzuzo yakho enokubakho.
Khangela iiStock eziNgaphezulu
Ngokwesiqhelo, abatyali mali abanobuqili baya kujonga ukufumana amasheya angaxabisekanga njengendlela yokutyala imali kwisaphulelo. Nangona kunjalo, njengomthengisi omfutshane, kuya kufuneka wenze okwahlukileyo. Oko kukuthi, kuya kufuneka ufumane isitokhwe esinokubakho ngaphezulu. Ukuba unako, oku kuya kukuvumela ukuba ufake indawo yokuthengisa emfutshane kunye nembono yokufumana inzuzo kwixabiso elinyusiweyo lesitokhwe.
Uyenza njani le nto? Ewe, enye yeendlela ezilungileyo zokufumana ukuba istokhwe sigqithile okanye asixabisekanga kukusebenzisa umlinganiso wobalo. Phambili koku ngumlinganiso weP / E.
P / E Ubungakanani
Ixabiso lokufumana umvuzo (P / E) umyinge ujonge amaxabiso esitokhwe senkampani ngokumalunga nengeniso yawo ngesabelo ngasinye. Ukufumana okokugqibela, kuya kufuneka uhlule inani elipheleleyo lezabelo ezisasazwayo kwinzuzo yakutshanje yenkampani.
Nje ukuba ufumane umvuzo ngesabelo ngasinye, kuya kufuneka uwahlule kwixabiso lesitokhwe langoku. Oku kuya kukunika umlinganiselo. Ngoku, kuya kufuneka uthelekise lo mlinganiselo phakathi komndilili wecandelo.
Umzekelo, masicinge ukuba ujonge isitokhwe seGlaxoSmithKline. Ukuba inomlinganiselo we-P / E we-17, kodwa umndilili wecandelo lezinto ezixuba amayeza li-12, emva koko inokugqithiswa kwaye ke-libonise ithuba elihle lokuthengisa ngokufutshane!
Relative Index Ukomelela
Isalathiso samandla esihambelanayo (RSI) sisalathiso sobuchwephesha esidumileyo esisetyenziswa phantse ngabo bonke abathengisi abafutshane. Kungenxa yokuba isibonisi sinakho ukusixelela xa isitokhwe sigqithisile okanye sithengisiwe. Ukuba yeyokuqala, ke i-RSI iya kubonisa ukuba ukulungiswa kwexesha elifutshane kunokwenzeka ekwenzeni.
Ukuba kunjalo, oku kuya kukuvumela ukuba ufake i-odolo yokuthengisa esitokisini. Umgaqo ngokubanzi wesithupha kunye ne-RSI kukuba ukuba isalathi siphula i-70 / 100- kusenokwenzeka ukuba yintsimi egqithisileyo. Ukuba isalathiso singaphantsi kwe-30/100-oko kuthetha ukuba izitokhwe zinokubakho ngaphezulu.
Yintoni ukuCudisa okufutshane?
Usenokuba ulifumene igama elithi 'cudisa ngokufutshane', kodwa ungazi ukuba lithetha ntoni kanye kanye. Ngamagama alula, oku kubhekisa kwi amanyathelo ixabiso yesitokhwe. Ngokukodwa, kuxa ixabiso lesitokhwe lihamba kwindlela ephezulu ngokukhawuleza.
Ngokwenza njalo, inyanzela abathengisi abafutshane ukuba baphume kwizikhundla zabo kwaye babeke iodolo yokuthenga. Benza oku ngombono wokusika iilahleko zabo ngokusukela imeko ephezulu. Kwelinye icala, oku kunyanzela ixabiso lesitokhwe ukuba lonyuke kwinqanaba elikhawulezayo, kwindlela yesitayile sokuthetha.
Le yinto onokuyiphepha njengomthengisi omfutshane ngokuqinisekisa ukuba uhlala uneodolo yokulahleka kokuma endaweni. Ukuba awazi ukuba isebenza njani le nto, masikunike umzekelo olula.
I-Orders ye-Stop-Loss xa Usisitokhwe esifutshane
Ukuyekisa i-odolo yinto esiyincomayo kulo lonke urhwebo- hayi isitokhwe kuphela. Ngamafutshane, zikuvumela ukuba unciphise ilahleko yakho ngexabiso elithile. Umzekelo, masicinge ukuba ufuna ukufutshane kwisitokhwe seAlfabhethi, kodwa awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-10% yesibonda sakho. Kananjalo, konke okufuneka ukwenze kukuseta i-odolo yokuyeka ilahleko ngexabiso le-10% ngaphezulu kunexabiso lakho lokungena.
Masithi izitokhwe zeAlfabhethi zithengiswa nge- $ 1,500 nganye
Ucinga ukuba zigqithisile, ke ubeka iodolo yokuthengisa
Awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-10% yesibonda sakho
Kananjalo, useta i-odolo yokulahleka kokuyeka kwi- $ 1,650
Ukuba urhwebo lwakho lokuthengisa olufutshane luhamba gwenxa- oko kuthetha ukuba isitokhwe seAlfabhethi siyanda, urhwebo lwakho luya kuvalwa ngokuzenzekelayo ukuba ixabiso libetha i $ 1,650
Ngamanye amagama, nokuba isitokhwe seAlfabhethi sonyuke ngeepesenti ezingama-20 (oko kukhokelela kwilahleko engama-20% kwi-odolo yakho yokuthengisa), ngekhe ulahlekelwe ngaphezulu kwe-10% njengoko ubunomyalelo welahleko yokumisa endaweni. Qaphela, ii-odolo zokuyeka ilahleko azisoze zaqinisekiswa nge-100% ukuba zifaniswe neemarike.
Nangona oku kunqabile, kunokwenzeka ngexesha lentengiso. Ekuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba oku akwenzeki kukubeka i-odolo 'yokuqinisekisa' yokuyeka ilahleko kumthengisi wakho. Oku kuya kuhlala kukuxabisa ngakumbi kwikhomishini, kodwa kufanelekile kakhulu.
Abarhwebi abaGqibeleleyo kwiiStock eziMfutshane
Ke ngoku ekubeni uyazi i-ins kunye nokuphuma kwendlela yokufumana isitokhwe esifutshane, ngoku siza kuxoxa ngabathengisi abaphambili be-Intanethi ukwenza oku. Njengoko sityhile kwisikhokelo sethu, bonke abarhwebi abacetyiswayo abadweliswe apha ngezantsi bagxile kwizixhobo zeCFD. Oku kuqinisekisa ukuba ungathengisa ngokufutshane isitokhwe ngasinye esinikelwa liqonga.
1. I-AVATrade -Intengiso ye-CFD ekwi-Intanethi enefizi ephantsi
I-AVATrade lelinye iqonga lokurhweba kwi-Intanethi esingabalandeli abakhulu. Umrhwebi uneelayisensi ezininzi zenqanaba elinye kwaye usebenzisa iindlela zokhuseleko kumgangatho wamaziko. Kananjalo, iimali zakho zikhuselekile ngalo lonke ixesha, nangona kunjalo, apho i-AVATrade inyanzelekile ukuba ibonelele ngethala leencwadi elinempahla enkulu, ii-indices, ii-ETFs, ukhetho, iimpahla kunye nokunye.
Kwakhona, zonke ii-stock ze-CFD ezinikezelwa yindawo yokurhweba ephezulu zinokuthengiswa ngokufutshane. Uya kufumanisa ukuba i-AVATrade ibonelela ngezinye zezona ndawo zisasazekayo kwisitokhwe seCFD. Iqonga alihlawulisi naziphi na iikhomishini, kwaye zonke iidiphozithi / ukukhutshwa kwemali akukho ntlawulo. Kufuneka wongeze kuphela i-100 yeedola kwiakhawunti yakho ukuqala ukuthengisa ngokufutshane ngalo broker.
I-Capital.com liqonga elikhulu lokurhweba kwi-Intanethi kwizitokhwe ezimfutshane. Iqonga libonelela ngeemfumba zotshintshiselwano lwesitokhwe onokufikelela kuzo ngonqakrazo lweqhosha. Ngapha koko, uya kuba nokufikelela ngaphezulu kwe-2,400 isabelo se-CFDs ezivela e-US, UK, Japan, Italy, Norway, France, Germany, kunye nokunye.
Ayinamsebenzi ukuba loluphi uhlobo lotshintshiselwano olujolise kulo, njenge-Capital.com yipesenti ye-100 yeefizi zentengiso. Sikwafumanisa ukuba le ndawo yokurhweba inikezela ngokusasazeka okuqinileyo kwizabelo zayo zeCFD, ezilungele ukugcina iindleko zakho zorhwebo ziphantsi. Akukho mirhumo yokuxhasa iakhawunti yakho ye-Capital.com nokuba akukho mfuneko yokuba uhlawule nantoni na ukuze urhoxe.
I-Capital.com ikwayindlela entle ukuba ujonge ukurhweba ngeziteki ezincinci. Oku kungenxa yokuba kufuneka kuphela ukuhlangabezana idipozithi ubuncinane £ / $ 20 ukuze uqalise. Okona kulungileyo, ungafaka imali kwangoko ngedebhithi / ikhadi letyala okanye i-wallet. Eli qonga lithembekileyo leCFD lilawulwa yiFCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB.
Kwixesha elingekude kangako, ukunqongophala kwesitokhwe yayiyinto ekhoyo kwabo bavela kwimvelaphi yeziko. Kungenxa yokuba indlela 'yakudala' yokwenza izinto yayintsonkothe ​​kakhulu-emva koko ifuna abatyali-mali ukuba baboleke amasheya kumntu wesithathu emva koko baphinde bazithenge kamva.
Kodwa, khawuleza uye phambili kwi-2021q nangaphaya kwaye nabani na unokufumana isitokhwe esifutshane ngokusebenzisa iqonga le-CFD elilawulwayo Ngapha koko, unokufumana isitokhwe esifutshane ngokunyusa le mihla-ukuvumela ukuba wandise inzuzo yakho ngonqakrazo lweqhosha!
Kuthetha ntoni ukufutshane kwisitokhwe?
Ukuba ufutshane kwisitokhwe, oku kuthetha ukuba uqikelela kwixabiso lesitokhwe esiya ezantsi.
Uzenza njani izitokhwe ezimfutshane kwi-Intanethi?
Ukuba ufuna isitokhwe esifutshane kwi-Intanethi, konke okufuneka ukwenze kukujoyina umthengisi olawulwa yiCFD. Emva koko, xa sele wazi ukuba yeyiphi impahla oyifunayo, kufuneka ubeke i-odolo yokuthengisa.
Zeziphi ezona stock zilungele ukufutshane ngoku
Ukuba ujonge isitokhwe esifutshane kuya kufuneka ufumane iinkampani okholelwa ukuba zigqithisiwe. Elinye iqhinga lokugcina iso kwiindaba zezemali. Xa ibali elibi liphuka, ungaqhubeka ngokufutshane kwisitokhwe salo.
Zeziphi iifizi endizakuzihlawula xa ndifumana isitokhwe esifutshane?
Oku kuxhomekeke kukhetho lwakho lweqonga. Ukuba usebenzisa omnye wabathengi bethu beCFD, awuyi kuhlawula nayiphi na ikhomishini kwisitokhwe esifutshane. Kodwa ke uya kuhlawuliswa imali yokulala ngosuku ngalunye ukuze ugcine isikhundla sakho sivulekile-njengoko uthengisa ii-CFD.